नेपालको राजनीति १९ वर्ष अघि भन्दा झन् अस्तव्यस्त (भिडियोसहित)
अलिकति बाटो बढाएर धूलो उडाउँदैमा देश बन्दैन !
लोकपथ संवाददाता असार १८, २०७५ | सोमबार
चुनावको बेलामा हजारौँ लाखौँ युवाहरूलाई स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता बाँडेका राजनीतिक दलहरू युवाका तिनै एजेन्डामा अहिलेपनि तिनै राजनीति गरिरहेका छन् । तर, युवाका खास समस्याहरू सम्वोधन हुन सकेका छैनन् । देशमा पर्याप्त मात्रामा उद्योग र युवाहरूका लागि रोजगारीका वातावरण सिर्जना नहुँदा आज पनि विमानस्थलमा दैनिक हजारौँका सङ्ख्यामा होनहार युवाशक्तिहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि लामो लाइन लागिरहेका हुन्छन् । नेपालीलाई परिवारको जोहो जुटाउन परदेश जानैपर्ने परिस्थितिको सिर्जना भएको छ ।सरकारले देशमै रोजगारीका अवस्था सिर्जना गर्ने भनेपनि सम्भावनालाई व्यवहारिक बनाउन सकेको छैन । अर्काको भुमिमा युवावर्गले कस्ता पीडा बेहोर्नु परेको छ ? समस्याको समाधान के हुन्छ ? यसै विषयमा लोकपथका लागि नेपाली जनसम्पर्क समिति, साउदी अरबका वरिष्ठ उपसभापति अर्जुन थापासँग लोकपथकर्मी अनिता आचार्यले गरेको खास कुराको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ :
रोजगारीका लागि १९ वर्षदेखि साउदी अरबियामा हुनुहुन्छ । कहिले आउनुभयो नेपाल?
नेपाल आएको झण्डै दुई हप्ता भयो । विदेशी जीवन बिताउन लागेको पनि झण्डै १९ वर्ष भयो ।
हालै साउदीका एक राजकुमार जेल परे तर यसलाई ठूलो मुद्दा बनाइएन । सबैजना अरु बेला जसरी नै सामान्य आ–आफ्नो काम ग–यौं । यही कारणले गर्दा नै विकास भएको हो कि भन्ने लाग्छ ।
१९ वर्षमा यहाँले देख्नु भएको साउदी अरबियाको परिवर्तन बताइदिनुस् न !
हामी जाँदाको र अहिलेको साउदी अरबिया पूरै फरक छ । त्यति बेला पुराना संरचनाहरू मात्र थिए । प्राय माटोका घरहरू थिए कहीँ कतै देखिने बिल्डिङहरू पनि स–साना थिए । बाटाहरू साँघुरा थिए । योजनावद्ध विकास भएको थिएन । तर अहिले उनीहरूले निकै ठूलो फड्को मारेका छन् । ६ लेनको बाटो छ, ओभरहेडपुल बनेका छन् र सबै जनतालाई सरकारले नै सेवा सुविधा दिन्छ । अर्को कुरा साउदी अरबमा न बन्द हुन्छ, न हड्ताल । नेपालमा जस्तो सानो कुराले बन्द हड्ताल गर्ने चलन छैन त्यहाँ । त्यसैले पनि त्यहाँ आनन्दले विकास भइरहेको छ ।
कानून पनि सबैलाई बराबरी छ ।हालै साउदीका एक राजकुमार जेल परे तर यसलाई ठूलो मुद्दा बनाइएन । सबैजना अरु बेला जसरी नै सामान्य आ–आफ्नो काम ग–यौं । यही कारणले गर्दा नै विकास भएको हो कि भन्ने लाग्छ ।
अब यो बताईदिनुहोस् कि, उन्नाइस वर्ष अगाडिको नेपाल र आजको अवस्थालाई तपार्इंले कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
सान्दर्भिक प्रश्न । उन्नाइस वर्षअघि भन्दा मैले आज नेपाल झन् अस्तव्यस्त देख्छु । हिजोका दिनमा केही थियो, केही काम भएको थियो । आज आएर त काम पनि भएको देखिन्न । अलिकति बाटो बढाएर धूलो उडाउँदैमा संरचना बन्ने होइन । देश बन्ने होइन ।
हामीकहाँ काम गर्ने तरिका नै छैन । बजेट सकिन्छ, तर काम केही हुँदैन । अब त यहाँ राम्रो चिज के छ भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । जुन पार्टी भए पनि देशलाई माथि पु–याउन सकेनन् । हो, यहाँ अर्को दुर्भाग्य के छ भने नेपालमा प्रशासकलाई गाइडलाइनमा ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । प्रशासकले शासकलाई गाइड गर्छन् । मन्त्रीले नै यहाँ सचिव ज्यूहरूसँग सोधेर योजना बनाउनुहुन्छ । किनभने आफूसँग कुनै भिजन नै छैन । भिजन नभएपछि अरुसँग सोध्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । धेरै राजनैतिक दलले आफ्नो स्वार्थका लागि सोच्नुहुन्छ । आफ्नै फाइदाका लागि कानून बनाउन बल गर्नुहुन्छ । नेता ज्यूमा उत्तिकै स्वार्थ छ ।
केही समयअघि यही स्टुडियोमा एक मन्त्रीज्यूलाई लास्ट बेन्चरहरूले सधै राजनीति गरे, अनि राम्रा युवाहरूलाई स्वदेशमा बस्ने वातावरण नभएर विदेश जानुपर्ने वाध्यता छ भनेर सोध्दा उहाँले ‘विदेशमा बसेर नेपाललाई गाली गर्ने अधिकार छैन’ भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । के भन्नुहुन्छ ?
सायद मन्त्री ज्यूलाई नै थाहा छैन कि, ढुङ्गा मुढा गरेर आउनुभएको बुद्दीले चल्दैन । उहाँहरूको जस्तै सबैको बोल्ने अधिकार छ । बहस गर्न पाउनुपर्छ, किनकि यो हाम्रो प्रजातान्त्रिक अधिकार पनि हो । सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्न पाउनुपर्छ । टिका–टिप्पणी नै गर्न पाउनुहुन्न भन्ने उहाँहरू को? उहाँले त राज्यबाट सेवा सुविधा लिनुभएको छ नि, खोइ त हामीले पाउने सेवा सुविधा? मैले पाएको छु त? ट्याक्स त तिरिरहेको छु नि ।
उहाँहरूको भनाइ अनुसार त आफू नालायक छन् भने अरुलाई पनि नालायक देख्छन् भनेजस्तै हो । मैले मेरा लागि कुरा गरेको छैन नि, मैले देशका बारेमा गरेको कुरा हो । उहाँहरू त्यसो भन्नुहुन्छ भने त्यो सरासर गलत हो । अधिकार छैन भन्नुहुन्छ भने रेमिट्यान्स पठाउने अधिकार पनि छैन भन्नुप–यो । मेरो परिवार त यहाँ छ नि, ट्याक्स त मैले हरेक कुराको तिरेको छु । सेवा सुविधा नपाएको त हो नि । यदि मन्त्री ज्यू नै त्यसो भन्नुहुन्छ भने त्यो अव्यवहारिकता हो ।
सायद मन्त्री ज्यूलाई नै थाहा छैन कि, ढुङ्गा मुढा गरेर आउनुभएको बुद्दीले चल्दैन । उहाँहरूको जस्तै सबैको बोल्ने अधिकार छ । बहस गर्न पाउनुपर्छ, किनकि यो हाम्रो प्रजातान्त्रिक अधिकार पनि हो । सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्न पाउनुपर्छ । टिका–टिप्पणी नै गर्न पाउनुहुन्न भन्ने उहाँहरू को? उहाँले त राज्यबाट सेवा सुविधा लिनुभएको छ नि, खोइ त हामीले पाउने सेवा सुविधा? मैले पाएको छु त? ट्याक्स तिरिरहेको छु नि ।
प्रसङ्ग मौडौं, आफू जन्मेको ठाउँ, आफ्नो मातृभुमि छाडेर परदेशको यात्रा तय गर्दा, परिवारसँग छुट्टिएको वातावरण र प्लेनमा बसेर होल्ड हुँदै गर्दा एउटा नेपालीले के सोचिरहेको हुन्छ?
त्यतिखेर म आफूलाई एकदमै गरीब सोच्छु । परिवारसँग त मलाई पनि बस्न मन छ नि । तर वाध्यताले विदेशिनु परेको हुन्छ । तर, यसमा म राज्यसत्तालाई दोष दिन्न । किनकि, म मेरो व्यक्तिगत स्वार्थले पनि विदेश गएको हुन्छु ।
साउदीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या करिब साढे चार लाख छ । विदेशमा जाने कति नेपालीले आत्महत्या ग–यो भन्ने पनि सुन्नुपर्छ । यस्ता घटना किन दोहोरिन्छन्?
अहिले सामाजिक सञ्जाल छ । मिडिया छ । एकाध केहीले आत्महत्या गरेका हुन सक्छन् । तर यस्ता घटना धेरै दोहोरिँदैन । किनकि नेपालमा भन्दा धेरै सुविधा छ त्यहाँ । धेरै मानिसमा विश्वास पनि हुन्छ । नेपाली छिटो आक्रोशमा आइहाल्ने भएकाले छिटफुट घटना घट्छन् ।
अरबको खाडीमा गएर दुख पाएको सन्दर्भलाई लिएर गित बनाईन्छ । बन्द कफिनमा लास आइरहेका पनि देखिरहेका हुन्छौं, भनेपछि पक्कै त्यहाँ समस्या छ । यस्ता समस्यालाई दूतावासले कसरी सहयोग गरिरहेको छ?
राजदूतावासको भन्दा पनि केही नयाँ जेनेरेसन गइरहेका छन् । ती आफूमा राम्रा पनि छन् । उनीहरूले नै सहयोग गर्छन्, मुद्दाहरूमा छलफल गर्छन् । तर यहाँ पनि एक–आपसमा दोषारोपण गर्ने, चर्किन खोज्ने चलन पनि छ, त्यो हुनु हुँदैन । नयाँ पुस्ताले चाहिँ कामगर्न खोज्छन्, सुझाव तथा सल्लाह पनि दिन्छन् । पुरानामा आफै जान्ने भन्ने भावना भने छ ।
तर आफ्नो पार्टीको झण्डा जसले बोक्यो, नेतृत्वमा जो छ, उसले आफ्नो मान्छे राजदूत बनाएर पठाउँछ भन्ने पनि सुनिन्छ । के बुझ्नुभएको छ? त्यसो भन्न मिल्दैन । नैतिक समर्थन हुन सक्छ । पहिलेपहिले यो अवस्था थियो । अहिले त्यस्तो छैन ।
राजदूत र राजदूतावासका कर्मचारीले प्रवासी नेपालीसँग कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ?
पहिले अन्तक्र्रिया कार्यक्रम पनि भइराख्थे । तर अहिले हुन छोडेका छन् । अहिले भैहाल्यो भने पनि गणतन्त्र दिवसका अवसर पारेर हुन्छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूले कोबाट सहयोग पाउनुहुन्छ?
सहयोगका लागि आफूभन्दा अग्रजलाई नै हेर्ने हो । मभन्दा अग्रजसँग मैले केही सिकिरहेको हुन्छु । सभ्यता, भाषा, कानून लगायतका कुरा हामीले अग्रजबाटै सिक्छौं । यही प्रक्रिया दोहोरिने हो ।
अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरूका लागि युवाहरूलाई सहज बनाउने भनेर आइरहेको छ । यहाँहरूले के देख्नुभएको छ? यो कत्तिको सहज छ?
सरकारले सहज बाटो अपनाएको छैन । नेपालमा एउटा तरिका हुन्छ, त्यो फलो गर्नुुहुन्छ । तर, उहाँहरूको काम गर्ने शैलीमा परिपक्वता देखिँदैन ।
यस्ता होनहार युवा भएर पनि राज्यले भने नेपालमा जनशक्तिको खाँचो छ भनिरहन्छ । मलाई लाग्छ, हामी दक्ष जनशक्ति बनाउँदै छौ भन्छ । सरकारका जानकारले युवा पाउनेबित्तिकै आफ्नो पछि लगाउनुहुन्छ । अनि युवा कसरी पाउनुहुन्छ ?
पछिल्लो समयमा श्रम स्वीकृति लिएको वा एउटा काम भनेर अर्को काममा पठाएको थाहा पाउनुभएको छ?
त्यो स्वभाविक हो । त्यहाँ कामको प्रकृति नै फरक छ । त्यही अनुसारको खुबी, इन्डोर काम, आउटडोर काम हेरेर काममा लगाइन्छ । अहिले यस्तो समस्या पनि घट्दै गएको छ ।
साढे चार लाख युवाले अरबमा काम चाहिँ के गर्छन्?
सबै खाले काम गर्नुपर्छ । ‘लेबरदेखि म्यानेजरसम्मका’ काम गर्नुपर्छ । दक्षताका हिसाबले काम हुन्छ । यस्ता होनहार युवा भएर पनि राज्यले भने नेपालमा जनशक्तिको खाँचो छ भनिरहन्छ । मलाई लाग्छ, हामी दक्ष जनशक्ति बनाउँदै छौ भन्छ । सरकारका जानकारले युवा पाउनेबित्तिकै आफ्नो पछि लगाउनुहुन्छ । अनि युवा कसरी पाउनुहुन्छ ?नेपालमा युवालाई काम गर्ने वातावरण नै छैन । न कुनै प्रोजेक्ट छ, युवालाई काममा लगाउन त प्रोजेक्ट हुनुप–यो नि । युवा त देशको समस्याले भन्दा पनि आफ्नो समस्याले बाहिर गएका हुन्छन् । नेपालमा रोजगारीको वातावरण मात्र होस् न, सबै नेपाली फर्किन थाल्छन् ।
भाषिक समस्याले कत्तिको असर पार्छ त?
भाषिक समस्या र ‘होम सिक’ भन्ने समस्या धेरै देखिन्छ । किनकि, त्यहाँ आफ्नो भन्ने खासै हुँदैनन् । उजाड लाग्दो मरुभूमि हो, बालुवा नै बालुवा छ । सबै बोल्ने अरबी नै हो, गाह्रो पक्कै छ । आफू जाने देशको भाषा जानेको राम्रो ।
अरबको खाडीमा नेपाली जाँदा यहाँको जस्तो कानून होला भनेर अनुमान लगाएर जाने र त्यहाँ गइसकेपछि कानूनी झमेलामा फस्ने गरेको पनि सुनिन्छ । हो?
त्यस्तो हुँदैन । जटिलताका बारेमा सबैलाई थाहा भइसकेको हुन्छ । पहिले त राहदानीमै लेखिएको हुन्थ्यो । भाषाले गर्दा समस्या होला, त्यो अर्कै कुरा, तर नेपाली कानूनमा अपडेट भएकै हुन्छन् ।
तपाईंले यो उन्नाइस वर्षको बीचमा यो खाडी मुलुकमा किन आएछु भन्ने कुनै दृश्य देख्नुभयो ? त्यस्तो कुनै मन छोएको कुनै घटना छ ?
यो धेरै वर्ष अगाडिको एउटा घटना छ । तीन जना नेपालीको गाडीको ठक्करबाट मेरै अगाडि मृत्यु भयो । त्यतिबेला चाहिँ विदेशमा किन आएछु भन्ने लागेको थियो । घटनामा आफ्नै मान्छे परेपनि हामीलाई उठाउन जाने अधिकार हुँदैन । निकै दुःख लाग्छ ।
अन्त्यमा एउटा कुरा भन्दिनुस् न, परदेशिएका नेपालीले नेपालमा लगानी गर्न कस्तो वातावरण खोजिरहेका छन् ?
लगानीका लागि नेताहरूले हामीमा पारदर्शिता देखाउनुप–यो । उहाँहरूले हामीलाई ‘भिजन’ दिनुप–यो । लगानी गरेअनुसार फाइदा हुने वातावरण ‘स्योर’ हुनुप–यो । गरेको लगानीमा सत्तरी प्रतिशत हामी लगानी गर्छौं, बाँकी राज्यले गरोस् । स्कूल, भवन जे मा पनि हामी लगानी गर्न तयार छौं । तर यूवाको पसिनामा झुटो राजनीति गर्नुभएन ।
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा धर्ना बसेका नेविसंघका कार्यकर्ता र पार्टी...
काठमाडौं– डीएसपीबाट एसपीमा बढुवा भएका प्रहरी अधिकारीहरुले जिम्मेवारी पाएका छन् । बुधबारमात्रै ब...
लाजिम्पाटबाट २१ किलो चरेशसहित ४ जना प्रहरीको फन्दामा
काठमाडौं– काठमाडौंको लाजिम्पाटबाट २१ किलो लागु औषध चरेशसहित ४ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको...
डा. गोविन्द केसी फेरि अनशन बसे म पनि अनशन बस्छु : विजय थापा